Allgedo.com » 2017 » May » 16
Home » Archive Daily May 16th, 2017
Shirka Madasha Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee Dowladda dhexe iyo M/Goboleedyada oo ka socda Muqdisho
Waxaa maalintiisii labaad galay shirka u dhaxeeya Wasaaradaha Arrimaha Dastuurka ee Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada dalka oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho, maanta waxaa shirka ka soo qaybgalay Xeer-ilaaliyaha Guud ee Qaranka, Wasiirada Maamul Goboleeyda, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirka oo maanta waqti dheer qaatay ayaa lagu lafaguray su’aallo dhowr ahaa oo quseeyay...
Cashir Taariikheed: Ka baro Kulublay (SYL)
Inkastoo in mudda ah Soomaaliya ay ku jirtay kac-kuf, 15ka May waa maalin qiimo weyn u leh madax banaanida iyo midnimada ummadda. Dabaaldeggeedu wuxuu ku aaday maalin aan qaranimadda dalka gorgortan ku jirin, wadaninimada dadkeeduna ay caadda marayso. SYL (oo la aas-aasay 1943) waxey aheyd urur-siyaasadeedkii ugu horeeyay ee u halgama madax banaanida dhammaan degaanka Soomaaliya. Halgan ka sokow,...
Jamhuuriyadda 3aad: Tani waa curaay – WQ. Jaylani Cariif Qassim
Maalinba maalinta ka dambeysa dalka Soomaaliya wuxuu u sii siqaya dowlad-wanaag awood qaybsi ku dhehan. Ololahii “deb duuga” ee Madaxweynihii KMG Shariif Sheikh Axmed wuxuu suurta geliyey in dalka gudihiisa lagu duubo madaxweynihii ugu horeyey, kacdoonka dadweynaha ka dib. Sidoo kale hindisihii Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee sal -u-dhigidda heykalka dowladnimada wuxuu suurto gelisay in...